Home K ere Kachasị Akpụkpọ Ahịa Kachasị mma Kwesịrị Ekwesịrị Chrome-Plated Down Kitchen Faucet
Ihe Nke No.:8022A0CH
Ihe: 59% ọla kọpa / zinc alloy shei + oche ọla kọpa
Ebe a na-asa ahụ na-abụkarị isi nke kichin, ma na mmiri ịsa ahụ ga-abụ ihe dị mkpa maka onye na-eme atụmatụ ọ bụla. Kama ịga naanị otu nhọrọ maka pọmpụ ga-amasị mmadụ na ụlọ ahịa, ọ ga-adị mma ka ị nweta otu nke ga-adaba na mkpa ndị ahịa niile na nke ụfọdụ.
a kwatupu foucet kichin ga-abụ ihe atụ zuru oke. Sleek na chrome-steel, nke a abụghị naanị ihu mara mma. Igwe mmiri a, dị ka aha ahụ na-egosi, ga-agbadata ya na ọnụ mmiri ga - enyere aka ma nweta onye ọrụ. Ọ dị mma maka ụlọ ndị ahụ ebe ị na-emekọrịta achịcha na-eme achịcha ma ọ bụ kichin, ma ọ bụ ohere a na-arụ ọrụ buru ibu, akwa mmiri a na-akwado ọtụtụ ojiji.
Na otu lever nke enwere ike ijikọ aka gị n’ikpere aka aka gị jupụta, mmiri a na-agbadata agbadata n’ezie maka kichin nke oge a. Ọ dị mfe ịwụnye maka ndị ọrụ nkwekọrịta ma bụrụkwa nke na-enweghị ihe ọhụụ na profaịlụ ya, onye ahịa ọ bụla ga-ahụ akwa nsị nke kichin a na-acha chrome.
• Adaba adaba ịsapu kichin maka nhicha ngwa ngwa
• Otu ọrụ na-arụ ọrụ maka nlele
• Ogologo ogologo na ọkacha mma na agbaze maka kacha eji ya na akachasị nwee ike
Mbụ: Kachasị mma na-akụda nri kichin